प्रेमीको घरमा गएर सावित्राले किन लगाइन् पा ,सो ? – Taja Khawar
प्रेमीको घरमा गएर सावित्राले किन लगाइन् पा ,सो ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २७, २०७८ समय: ११:५७:०७
उदयपुरको वेलका नगरपालिका–२ करहैयाकी सावित्रा कुमारी चौधरीको प्रेम एक युवकसंग थियो । उनी त्रियुगा नगरपालिका–३ मा ठाँडी घर भएका विष्णु देव पंजियार संग करिब डेढ वर्ष देखि प्रेममा थिइन् ।
उनीहरुले साउन १९ गते श्रीमान श्रीमतीको हैसियतमा संगै बस्ने र लगनको दिन विवाह गर्ने तमसुक गरेका थिए । कानुन ब्यवसायीलाई राखेर कानुनी रुपमानै उनीहरुले तमसुकमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर त्यो तमसुकले पनि सावित्राको मृत्युलाई रोकेन । जब उनी ढुक्कसंग आफ्ना पति विष्णुदेवको घरमा गइन् उनले विष्णुसंगै अर्की एक युवतीलाई पनि देखिन् । त्यती मात्र होइन ति युवतीसंग विष्णुको ५ वर्ष देखि प्रेम रहेको कुरा पनि जब थाहा पाइन् उनले सहन सकिनन् ।
साउन २२ मा प्रेमीको घरमा जाँदा त्यहाँ अर्की युवती पनि देखेपछि सावित्रा बेचैन भइन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका अनुसार विष्णु देव र अर्की युवतीको बिचमा पनि पाँच वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेछ । सो सम्बन्ध थाहा पाएपछि सावित्राले आफूलाई सम्हाल्न सकिनन् र देह त्याग गर्ने निर्णय गरिन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले विष्णु देव पंजियारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
विष्णु देव नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेल्टार शाखा स्थित हडियामा कार्यरत हुँदा उनको सावित्रासंग भेट भएको थियो । त्यहाँवाट नै उनीहरुबीच प्रेम सुरु भयो । आफुसंग विवाह गर्ने तमसुक गरेका विष्णुको अर्की युवतीसंग पनि प्रेम छ भन्ने उनले सुइको पाइनन् । जब एकाएक घरमा युवतीलाई देखिन् उनले प्रेमीकै घरमा पा सो लगाइन् । सावित्राका बुवा देव नारायण चौधरीले पंजियारविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुर गरेका छन् ।
Last Updated on: August 11th, 2021 at 11:57 am